Rakkoo daangaa furuun nageenya waaraaf wabiidha
Koreen raawwachiiftuu hojii ADWUI dhiyeenya kana waldhabdeen Itiyoo-Ertiraa gudduu jiru karaa nagaafi mariitiin akka furamuuf waamicha taasiseera. Kana jechuun dhimma daangaarratti murtiifi yaadni haaraan jira jechuu miti.
Kaayyoon waamicha kanaa inni guddaan biyyoota lamaan gidduutti nageenya mirkaneessuu, hariiroo biyyoota lamaanii haaressuu, fayyadamummaa ummataa mirkaneessuufi misoomaafi guddina biyyaa itti fufsiisuudha.
Rakkoon daangaa Itiyoo-Ertiraa gidduu jiru kan furamu sarara daangaa sararuudhaan utuu hintaane mariifi karaa nagaatiin hiikuuf itti adeemamaa jira. Dhimma daangaa kana irratti murtiifi yaadni haaraan hinjiru. Kun dhimma siyaasaa utuu hintaane dhimma nageenyaafi fayyadamummaa ummata biyyoota lamaanii karaa itti fufiinsa qabuun mirkaneessuuti.
Rakkoon nageenyaa waraanaan utuu hintaane mariidhaan furmaata waaraa argata. Nagaan yoo jiraateedha misoomni, guddinniifi fayyadamummaan ummataa mirkanaa'uu kan danda'u. Kanaafuu ummannis ta'e mootummaan biyyoota lamaanii nageenya, misooma, guddinaafi fayyadamummaa ummataafi biyyasaanii mirkaneessuuf sochii eegalame gara bu'aa qabatamaatti fiduuf sochii eegalame cimsanii itti fufuutu irraa eegama.
Daangaa Itiyoo-Ertiraa ammaan booda dhimma siyaasaa ta'uu hinqabu. Dhimma nageenyaarratti ummatni tokkummaadhaan hojjechuu qaba. Nageenyi yoo jiraateedha misoomniifi guddinni itti fufsiisa qabu jiraachuu kan danda'u.
Rakkoo nageenyaa biyyoota lamaanii mariidhaan furuun fayyadamummaa biyyoota lamaanii kan mirkaneessu ta'uufi mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf dhiyeenyatti garee jilaa gara Finfinneetti kan ergan ta'uu Pirezidaantiin Ertiraa, Isaayyaas Afawarqi ibsaniiru.
Daangaa Itiyoo-Ertiraarratti murtiifi yaadni haaraan hinjiru. Mariin taasifamus dhimma siyaasaa utuu hintaane dhimma nageenyaafi fayyadamummaa ummata biyyoota lamaanii karaa itti fufiinsa qabuun mirkaneessuurratti.
Har'a Itoophiyaafi Ertiraan aadaa, duudhaafi afaan walisaan fakkeessuu qaban haa hafuutii biyyoonni kanaan dura gamaa gamas taa'anii walgaarreffachaa turan hedduun rakkoosaanii mariidhaan furuuf socho'aa jiru jechuun biyyoonni lamaan rakkoo jidduusaanii jiru mariidhaan hiikamuu akka qabuudha Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad tibbana kan ibsan.
Yeroo addunyaan tokko ta'aa jirtu kanatti biyyoonni ollaa walirraa fagaachuun duubatti hafummaa waan ta'eef dhimmoota akkanaarratti dammaquun barbaachisaadha. Yeroo ammaa rakkoon kamiyyuu furamaa kan jiru mariidhaan ta'aa jira. Addunyaa jijjiiramarra jirtu waliin socho'uun ammoo gamnummaadha.
Rakkoo daangaa Itiyoo-Ertiraa waggootaaf ture karaa nagaatiin furuuf sochiin gama biyyoota lamaaniitiin eegalame cimee ittifufuu qaba. Rakkoo gama kanaan jiru mariidhaan furuun ammoo nageenya waaraafi faayidaa ummatoota biyyoota lamanii mirkaneessuuf wabii ta'uun sirriitti hubatamuu qaba.
Torban kana/This_Week 4959
Guyyaa mara/All_Days 1642554